XOG: Dhimashadii Uu Ka Badbaaday, Halyeeyada Ay Qaraabada Yihiin Iyo 9 Arrimood Oo Aanad Ka Ogeyn Van Dijk - Gool24.Net
XOG: Dhimashadii Uu Ka Badbaaday, Halyeeyada Ay Qaraabada Yihiin Iyo 9 Arrimood Oo Aanad Ka Ogeyn Van Dijk
April 11, 2020 Abdiwahab A. Abeye
28 jirka difaaca uga ciyaara Liverpool ee Virgil van Dijk waxay dunidu taqaanay wax aan ka badnayn toddoba sannadood, waxaana magaciisu inuu galo waddanka England ugu horreysay sannadkii 2013 oo uu ku biiray Celtic.
Xataa markii uu joogay Southampton, taageereyaasha badankoodu wax badan kalamay soconin xirfaddiisa iyo waxqabadkiisa, laakiin waxa uu caan ku noqday qiimihii wareerka ahaa ee Liverpool kusoo iibsatay oo ahaa £75 milayn oo xilligaas loo arkayay inay ahayd wareer maadama aan waxqabadkiisa hore dadka badankoodu ula soconin.
Xilligan lagu jiro fasaxa ee ay ciyaaruhu hakadka ku jiraan, waxa dunidu dib ugu noqonaysaa inay soo bandhigaan taariikho iyo waxyaabihii kale ee dhacay, waxaana taas ugu wacan in aanay jirin dhacdooyin maalinle ah oo badan oo lagu mashquulo.
Qormadan, waxa aanu idiinku soo gudbinaynaa sagaal arrimood oo laga yaabo in aanad ka ogeyn Virgil van Dijk, kuwaas oo qaarkood ku sallaysan yihiin noloshiisa shaqsiga ah kuwo kalena la xidhiidhaan bandhiggiisa ciyaareed.
1. Virgil van Dijk waxa uu ka shaqeeyey maqaaxi laga cunteeyo oo uu weelka maydhi jiray, waxaanu saacadii mushahar u qaadan jiray €4 oo kaliya.
2. Taariikhda Van Dijk, waxa ugu jirta gool uu sidii Maradona kalidii kasoo qaatay difaaca oo uu lasoo dhex-cararay ciyaartoyda naadiga kasoo horjeeda oo dhan, iyadoo uu u ciyaarayo Celtic, waxaanu goolkaas ka dhaliyey St Johnstone.
Kooxda reer Scotland waxay xilligaas ku iibsatay Van Dijk €2 milyan oo Euro oo kaliya.
3. Ka hor intii aanu noqonin difaaca dunidu taqaano ee difaaca buuxa ah, waxa uu Van Dijk ka ciyaari jiray difaac midig isaga oo xidhan jiray No.2.
4. Markii uu joogay kooxda Willem II, waxa uu kooxdaas la joogay toban sannadood oo aanu wax heshiis ah kula jirin.
5. Taageereyaal badan oo Liverpool ah waxay xasuusan doonaan sidii ay Liverpool u gashay dagaalkii ay kula saxeexatay Van Dijk iyadoo kaga guuleysatay Manchester City iyo Chelsea oo uu Antonio Conte ka booday qiimaha £75 milyan ee ugu dambayntii ay Reds ku iibsatay.
6. Sida la sheegay, Van Dijk waligii kama fogaanin xuduudka Scotland. Sida uu qoray wargeyska Daily Record sannadkii 2014 waxa dul wareegayay kooxaha Southampton oo ugu dambayntii ku guuleysatay iyo Newcastle United oo saxeexiisa raadinaysay, halka ay Sevilla iyaduna ku jirtay tartanka.
7. Laacibkan ku guuleystay abaal-marinta xiddiga Ingiriiska ee PFA 2019, waxa uu u sheegay wargeyska FourFourTwo inuu nasiib ku leeyahay inuu wali dunida sii joogo. Sannadkii 2012 ayuu ku sigtay inuu u geeriyoodo Qabsin, kaddibna infakshan ayaa kellida kaga dhacay. Waxa xilligaas la saxeexay warqad damaanad ah oo dhakhtarkii qalliinka ku samaynayay loogu caddaynayay in aanay cidina u raaci doonin haddii uu ku geeriyoodo qalliinka.
8. Hadda waa kabtanka Nethaldns, waxaana uu raadkooda hayaa halyeeyo hore oo dalkaas usoo ciyaaray oo dhinaca qoyska ay iska metelaan. Laacibiintan oo ay ka mid yihiin Edagar Davids, Clarence Seedorf iyo Frank Rijkaard dhamaantood hooyooinkood ayaa ka yimid Koonfurta Amerika, sidaas oo kalena Van Dijk ayay hooyadii ka timid qaaraddaas.
9. Markii uu yaraa, waxa uu ku koray daawashada iyo jacaylka kooxdii xiddiguhu ka buuxeen ee Barcelona ee 1990-meeyadii, waxaana intii uu yaraa uu ahaa taageere weyn oo Barcelona ah.